James Swan: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiq halis ah” | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO James Swan: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiq halis ah”
James Swan: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiq halis ah”
Wakiilka Qaramada Midoobay Soomaalia James Swan ayaa sheegay in xiisadda siyaasadda ee ka taagan Soomaaliya ay halis ku tahay horumarkii laga samaynay dib u dhiska hannaanka dawladdeed iyo amniga dalka.
Swan ayaa hadalkan ku sheegay warbixin ku saabsan xaalada Somalia oo uu siiyey kulan Golaha amaanka ee QM ka yeeshay xaalada Somalia isagoo walaac ka muujiyey iska hormaadka, xeeladaha cadaadiska iyo awood muujinta oo uu sheegay inay halis ku tahay xaaladda waddanka.
“Shirka maanta ee Golaha ayaa ah mid ku soo beegay waqtigiisii ​​iyadoo la eegayo isbadalada muuqda ee ka socda Soomaaliya todobaadyadii la soo dhaafay, iyo xitaa maalmo. Xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya waxay khatar ku yihiin horumarka dowlad dhisidda Soomaaliya iyo xitaa amniga haddii aan lagu xallin wadahadal iyo tanaasul danta dalka ku jirta. Nasiib darrose, taas beddelkeeda waxaan aragnaa dabeecad xumo sii kordheysa, xeelado cadaadis, iyo tijaabooyin xoog ah oo sare u qaadi kara halista oo keliya” ayuu yiri Swan.
Wakiilka QM ayaa intaas ku daray in xiisada siyaasadeed ee ka taagan Somalia ay sabab u tahay dib u dhaca doorashada iyo hanaankii doorasho cusub loo qaban lahaa oo la isku fahmi waayey.
Waxa uu sheegay in heshiiskii la gaaray 17-kii Sebtember u yahay kan ugu habboon ee lagaga bixi karo dib u dhaca dooarshada, iyo xaqijinta in hoggaamiyayaasha Soomaaliya ay idan cad u haystaan wajaibaadkooda isla markaana loogu soo noqon alhaa in mudnaanta la siiyo ajandayaasha qaranka.
“Is-maandhaafka siyaasadeed ee ka dhex jira hoggaamiyeyaasha muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa horjoogsaday hirgelinta qaab-doorasho oo ay ku heshiiyeen Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyaasha Dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka 17-kii Sebtember 2020. Qaabkan waxaa si rasmi ah u oggolaaday labada aqal ee Baarlamanka waxaana taageeray dhammaan siyaasadaha kale ee waaweyn. laakiin hirgelinta ayaa muran ka taagan yahay” ayuu yiri wakiilka QM.
Waxaa uu intaas ku daray in xiisadii ka taagneyd qabashada doorashada ay ka daba timid su’aalo ka yimid dhinacyada Siyaasada Soomaalida oo la xiriira sharci ahaanshaha madaweynaha oo waqtigii uu ka dhacay 8 bishan Febraayo.
“Xiisadaha ka taagan hirgelinta doorashada ayaa hadda waxaa ku soo kordhay su’aalo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah dadka siyaasada ku xeel dheer ee ku saabsan sharci ahaanshaha waajibaadka madaxweynaha ka dib markii uu dhammaaday muddadiisii ​​dastuuriga ahayd 8 Febraayo. Xukuumaddu waxay soo xigatay qaraarkii baarlamaanka ee bishii Oktoobar u oggolaanayay Madaxweynaha inuu sii joogo” ayuu yiri wakiilka QM.
James Swan ayaa soo qaatay qalaalisihii jimcihii la soo dhaafay dhexmaray ciidamada amaanka DF iyo musharaxiin dooneysay iney banaanbax ku qabsadaan magaalada Muqdisho.
“Subaxnimadii 19-ka Febraayo, maalin mudaaharaad ah oo ay ku dhawaaqeen Golaha mucaaradka ee Murashaxiinta Madaxweynaha, dhowr dhacdo oo rabshado wata ayaa la soo sheegay. Inkasta oo faahfaahin buuxda aan la xaqiijin, dhacdooyinkaas waxaa la soo weriyey inay ka mid ahaayeen is-weydaarsi hubaysan oo u dhexeeya ciidamada amniga ee dawladda iyo kooxaha mucaaradka, iyo sidoo kale rasaas ay ridayaan ciidamada dawladda si ay u kala eryaan dibad-baxayaasha, Sidaa awgeed, tani waa xilli kacsan Soomaaliya, maadaama hadallada iyo ficilladuba ay sii kordhayaan, ayuu yiri James Swan.
Wakiilka QM ayaa xusay in natiijo wanaagsan ay ka soo baxday shirkii guddiyada farsamada DF iyo dowlad goboleedyadu ku yeesheen Baydhabo todobaad ka hor, si xal looga gaaro qodobada muranku ka taagan yahay ee doorashada.
“Dowladda Federaalka waxay isugu yeertay guddi farsamo oo ka kooban wasiirro sare oo ka socda DFS iyo DG, kuwaasoo ku kulmay magaalada Baydhabo 15kii ilaa 16kii Febraayo. Guddigu waxay ku dhawaaqeen inay gaareen xalal farsamo oo ku saabsan arrimaha la isku haysto, waxay xaqiijiyeen inay ka go’an tahay qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ee geeddi-socodka doorashooyinka, waxayna xuseen baahida loo qabo dib-u-habeyn cusub” ayuu yiri wakiilka QM.
Waxaa uu sheegay in shirka Baydhabo ka dib uu Madaxweyne farmaajo shir iskugu yeeray madaxda DG balse waxaa uu xusay in shirkaas ay carqaladeeyeen shaqaaqooyinkii ka dhacay Muqdisho dhowaan.
“Iyadoo lagu saleynayo shaqada Guddiga, Dowladda Federaalka waxay ku baaqday shir madaxeedka DF iyo DG in lagu qabto magaalada Muqdisho 18-ka ilaa 19-ka Febraayo. Hase yeeshe, dhacdooyinkii maalmihii la soo dhaafay ayaa carqaladeeyay qorshayaashan, hoggaamiyeyaasha Jubbaland iyo Puntlandna illaa iyo hadda waxay ka cagajiidayaan inay shirkaas ka qeyb galaan. Aniga iyo xubnaha kale ee beesha caalamka, waxaan sii wadaynaa dadaalka aan wax uga qabanayno walwalka labadan hoggaamiye si ay ugu soo biiraan geeddi-socodka si loo horumariyo heshiiska 17 Sebtember” ayuu yiri wakiilka QM.
Previous articleShiikh Shariif ”Wadadii dowladnimada waxaa hortaagan diktaatoriyad & xoriyad la dirir”
Next articleMusharaxiinta oo markii ugu horeysay cadeeyey mowqifkooda hadalkii Indhacadde
Diyaarado weerar bambaano ku qaaday Sacuudiga oo la bur buriyay
Faah Faahino kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax saakay ka dhacay Muqdisho
Dagaalyahano Al Shabaab Dagaal looga qabtay oo lasoo bandhigayo
Cabdi Cade - February 26, 2021
The corpse of the renowned traditional elder of Xawadle clan was finally laid to rest in a well known cemetery called Daara Ugaas near...
Somali Military Kills 70 al-Shabaab Members in Two Operations SOFREP
Statement by the SRCG, James Swan, to the Security council on the situation in Somalia
Abdigani Diriye named among top young African economic leaders Amazon